Mayelana NATHI - Guangzhou Xia Yong Sanitary Ware Co., Ltd.
I-Guangzhou Xia Yong Sanitary Ware Co., Ltd.
IGuangzhou Xia Yong Sanitary Ware Co., Ltd.iyinsizakalo engaphansi kweGuangdong Xia Yong Sports Industry Co, Ltd. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-10, inkampani yethu izibophezele ekwakhiweni, ekuthuthukisweni nasekukhiqizeni izindawo zokugeza zangaphandle ze-SPA, amakamelo okushisa, izindawo zokugeza zokubhucungwa, amakamelo okugeza, i-sauna nemishini yokubhukuda. Njengamanje, sinesisekelo sokukhiqizwa kwamamitha-skwele ayi-10,000 neqembu labasebenzi abanolwazi nabanentshisekelo.
Kokubili ikhwalithi enhle kakhulu, ubuhlakani obuyingqayizivele, nokwakhiwa nokuholwa kobuciko bokuzijabulisa, nokusakazwa kwekhwalithi enhle ngaphakathi kukodwa. Ngomkhiqizo ngamunye, kusukela ekukhetheni kwezinto ezibonakalayo, ukwakhiwa kuya ekwakheni, kunamathela kumazinga nezidingo ezihambisanayo zokuqala. Yonke imininingwane nayo yonke imikhiqizo ihlangabezana nezidingo zakho zekhwalithi ephezulu, ikuvumela ukuthi ubonge incazelo yangempela yekhwalithi ephelele.
IXia Yong Sanitary Ware igxile ekunikezeni abathengi ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme yokubhukuda. Ukuzibophezela ekuthuthukiseni lo mkhiqizo emhlabeni jikelele, futhi ngenhloso yokwenza lolu hlobo lufinyeleleke kuwo wonke umuntu, imikhiqizo yalo ithunyelwa eMiddle East Asia, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, njll., Futhi iboniswe ngazwi linye ngabasebenzisi ekhaya naphesheya. UXia Yonghui ulandela "iKhasimende kuqala, insiza kuqala" ngenhloso, ukuhlinzeka abasebenzisi ngensizakalo esezingeni eliphakeme.
Imikhiqizo yomkhiqizo weXia Yong sekuyisikhathi eside ihlolwe yiNational Sporting Goods Supervision Bureau, futhi amazinga wombiko wokuhlola ahlangabezana nezidingo zikazwelonke, kufaka phakathi isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo kwe-ISO14000 kanye ne-EU Ukuqinisekiswa kwesistimu ejwayelekile yamazwe omhlaba jikelele, ubuchwepheshe nekhwalithi yemikhiqizo ifinyelele ezingeni lobuchwepheshe. Ngo-2019, uXia Yong waklonyeliswa ngesiqu seSifundazwe SaseGuangdong Esigcina Inkontileka futhi Esinokwethenjelwa. Ngasikhathi sinye, umkhiqizo weXia Yong ubambe iqhaza emibukisweni yezemidlalo, eCanton Fair nakweminye imibukiso yezimboni, futhi uzuze owaziwa yimboni efanayo.